Imaaraadka Carabta oo Gaadiid ciidan ugu deeqday Ciidamada Booliska Soomaaliya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th June 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Gaadiidkan oo ah kuwa gaashaaman ayaa waxaa loogu tala galay in lagu xoojiyo Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, iyadoo munaasabad kooban oo lagu qabtay Xarunta Safaaradda Imaaraadka ee magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay gaadiidkaas.
Safiirka Dowladda Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al Xumaadi ayaa sheegay in gaadiidkani ciidan ay ugu talo galeen in lagu horumariyo howlaha ciidanka Boliiska Soomaaliyeed ay ka wadaan dalka ee la xiriirta xaqiijinta ammaanka.
Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed Jen Maxamed Sheekh Xasan Xaamud ayaa isna sheegay in qalabkan lagu xoojinayo Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, isagoo u mahad celiyay Dowladda Imaaraadka agabkan ay ugu deeqday Ciidamada Booliska.
Wasiirka Amniga gudaha C/risaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ay ku faraxsan yihiin kaalmada Dowladda imaaraadka carabta ay siineyso Soomaaliya, isla markaana Walaalaha imaaraadka Carabta ay ugu mahadcelinayaan caawimaada ay caawisay Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed.
Dhowaan ayay aheyd markii Imaaraadka Carabta ay ku wareejisay Maamulka Jubba gaadiid gaashaaman iyo gaadiid kale, waxaana deeqdaas ay aheyd tii u horeysay oo dhinaca milateriga ah oo ay Imaaraadka siiyaan Maamulkaas.